Ndakaiswa nayo ndikanzwa makumbo akudedera nekunakirwa! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Ndakaiswa nayo ndikanzwa makumbo akudedera nekunakirwa!
I have a confession, ndainge ndine Ex yangu and ainge ari munhu aribho apa aisvira zvokuti but for some reason ndakaita cheat on him.
Shamwari yeEx yangu yainge ine bachelor party and vainge vasipo for weekend saka ndainge ndiripamba ndega. Painge pane this guy wandaitaura naye for years but tainge tisati tambowonana since aigara kuBotswana but it so happened kuti mukomana wangu painge asipo this guy akauya kuHarare achigara pa Hoilday Inn. Inini ne this guy taitumira madirty pics mumwe musi ndakamutumira beche rangu rakatota iye achibva anditumirawo mboro yake ichiyerera huronyo abva kuibonyora.
Since musi iwoyo ndaingonzwa kuda kusvirwa naye, kungofunga nezvake masasi beche rangu raibva ratota. Mboro yake pandakaiwona on pic yainge yakafuta iripfupi saka ndaimuudza kuti musi wandichakuwona ndirikuda kuiiyisa mumuromo mangu ndoibonyora kusvikira watunda. He invited me ku Holiday Inn kuya and ndichiyenda chandaingofunga kusvirwa chete never mind kuti ndainge ndisati ndambomuwona, I couldnt believe kuda kusvirwa kwandainge ndakunzwa ipapo.
Ndakasvika ndokubva ndakanganwa all the formalities ndokubva ndangoti shamwari inini ndavinga pano kuzosvirwa chete, ndakasvirwa kakawanda musi uyu and every position ndakasvirwa nayo ndokuzopedzisira ndakuyamwa zimboro rake ndikanzwa shaya dzese dzakurwadza nekuvhura wandaiyita muromo kuti ndigone kuyamwa nekusvisvina huronyo hwese. I’m surprised handina kuita nhumbu coz hapana akafunga zve protection or should I say ndaida nyoro straight.
Its only recently that my now Ex-boyfriend found out kuti ndinotaura ne this guy but he still doesn’t know kuti weekend yaakayenda kuBachelor party ndakasvirwa husiku hwese and next week I am going ku Botswana ndirikufunga kunomboiswa futi.
Previous articleKubhadhara Rent neMbutu – LANDLORD akanakirwa aona Tan Tan Pazvidya
Next articleNhasi ndirikunzwa kuda kuiswa nyoro, kusvikira ndatundirwa mukati!